Ana Maria Matute | Akwụkwọ dị ugbu a
Isi iyi foto Ana María Matute: Zendalibros
N'ime nnukwu ndepụta nke ndị edemede Spanish, otu n'ime aha nwere mkpụrụedemede ukwu iji pụta ìhè bụ, n'enweghị mgbagha, Ana Maria Matute, Onye na-ede akwụkwọ akụkọ Spanish bụ onye jisiri ike bụrụ onye otu Royal Spanish Academy na-ebi oche 'K' na onye mmeri nke Cervantes Prize.
Mana onye bụ Ana María Matute? N’ihi gịnị ka e ji were ya dị ka otu n’ime akwụkwọ ndị kasị mkpa e nwere na narị afọ nke XNUMX na Spen? Anyị ga-achọpụta ya n'okpuru.
1 Ọnye na-bụ Ana María Matute
1.1 Ana María Maute na ịhụnanya
2 Kedụ akwụkwọ ị dere
2.2 Akụkọ mkpirikpi
2.3 Ọrụ ụmụaka
2.4 Gịnị bụ ọrụ kacha mkpa Ana María Matute?
2.5 Gịnị bụ akwụkwọ kacha amasị Ana María Matute?
Ọnye na-bụ Ana María Matute
Isi mmalite: Royal Academy of the Language
A mụrụ Ana María Matute Ausejo na July 26, 1925 na Barcelona. Ọ bụ nwa nwanyị nke abụọ nke ezinụlọ nke Catalan bourgeoisie, nke e ji mara okpukperechi na nke nchekwa. Nna ya bụ Facundo Matute Torres, onye nwe ụlọ ọrụ nche anwụ Matute SA, nne ya bụ María Ausejo Matute. Na mkpokọta enwere ndị otu 7, ụmụ 5 na nne na nna.
Ana María Matute nwata anọghị na Barcelona, ​​​​ma kama na Madrid. Agbanyeghị, akụkọ ndị o dere anaghị elekwasịkarị anya n'ebe a.
Mgbe ọ dị afọ anọ, onye edemede ahụ n'ọdịnihu dara ọrịa na nke ahụ mere ka ezinụlọ dum kwaga Mansilla de la Sierra, ebe nne na nna ya ochie si, n'ihi ahụike ya, na La Rioja.
Ella Ọ bụ otu n'ime "ụmụ agbọghọ" ndị biri na Spanish Civil War nke 1936, ebe ọ bụ na ọ dị afọ iri na otu n’oge ahụ. N'ihi nke a, ime ihe ike, ọnwụ, ịkpọasị, ịda ogbenye, wdg. Ha bụ ọnọdụ ndị o nwetara na nke mikpuru n'ime ya, nke mere o ji nwee ike ide banyere oge ahụ dị ka ọ dịghị onye ọzọ.
La Akwụkwọ akụkọ mbụ Ana María Matute bụ mgbe ọ dị afọ 17. Ọ bụ obere ihe nkiri, ọ bụ ezie na e bipụtara ya ruo 1950. Otu afọ tupu mgbe ahụ, o nyere akwụkwọ akụkọ ya bụ Luciérnagas maka Nrite Nadal, bụ nke mechara kpochapụ na agba ikpeazụ, ma nwetakwa nyocha.
Otú ọ dị, nke a emeghị ka mbọ ọ na-agba imere onwe ya aha n’akwụkwọ ka ọ kwụsịlata ma nọgide na-ebipụta ya ruo ọtụtụ afọ. Nke mere na na 1976 a họpụtara ya maka Nrite Nobel maka Akwụkwọ.
Ọrụ Ana María Matute lekwasịrị anya n'ịgụ akwụkwọ, ebe ọ bụ prọfesọ mahadum. Ọ gara ọtụtụ njem na-enye nkuzi n'obodo Spanish na Europe dị iche iche, yana United States.
En 1984 nwetara ihe nrite mba maka akwụkwọ ụmụaka na ndị ntorobịa na "naanị otu ụkwụ efu." Na 1996 ọzọ n'ime nnukwu ọrụ ya, "Eze Gudu echefuru", webatara ya ka ọ bụrụ kpakpando ọzọ mana, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ihe omume kachasị mma n'afọ ahụ bụ mgbe ahụ. Royal Spanish Academy họpụtara ya onye otu na onye nwe oche K, ịbụ nwanyị nke atọ bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Isi mmalite: asale.org
Ihe nrite enwetala ọtụtụ, ọ bụghị naanị aha ndị anyị kwurula na mbụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịkpọ gị: Nrite Planeta, Nadal Prize, National Prize for Spanish Letters, finalist for the Prince of Asturias Prize for Letters, Miguel de Cervantes Prize ...
Ana María Maute na ịhụnanya
Ndụ ịhụnanya ya abụwo ihe dị egwu karị. Ma ọ bụ ya na 1952 ọ lụrụ onye edemede Ramón Eugenio de Goicoechea. Afọ abụọ ka e mesịrị, a mụrụ nwa ya nwoke bụ́ Juan Pablo, bụ́ onye ọ raara ọtụtụ ọrụ ụmụaka nye.
Otú ọ dị, afọ 11 ka e mesịrị, ọ kewapụrụ na di ya, n'ihi iwu Spanish nke oge ahụ, o nweghị ikike ịhụ nwa ya nwoke n'ihi na onye nlekọta abụghị ya kama ọ bụ di ya. Nke a mere ka o nwee nsogbu mmetụta uche.
Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ịhụnanya kụrụ aka n'ọnụ ụzọ ya na onye ọchụnta ego Julio Brocard. Ma ọnwụ ya na 1990, kpọmkwem n'ụbọchị ọmụmụ nke onye edemede, mere ka ịda mbà n'obi nke na-adọkpụ site na mbụ mụbaa.
N'ụzọ dị mwute, na 2014, Ana María Matute nwụrụ n'ihi nsogbu ọrịa obi.
Kedụ akwụkwọ ị dere
Nke Ana María Matute anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ akwụkwọ akụkọ, Ma eleghị anya ihe ị na-amaghị bụ na ọ bụkwa onye na-ede akụkọ na egwuregwu ụmụaka. Na mgbakwunye, ha ka bụ ejiji na n'ezie ụfọdụ n'ime unu agụọla.
Kpọmkwem, yana site n'enyemaka Wikipedia, aha akwụkwọ Ana María Matute niile bụ ndị a (kewara n'ime isi atọ):
Ụmụ nwụrụ anwụ
Ndị agha na -ebe ákwá n'abalị
Ụfọdụ ụmụ nwoke
Echefuru Eze Gudú
Paradaịs na-enweghị onye bi
Ndị mmụọ ọjọọ ama ama.
Nwa nwoke nke na-esote ya
Akụkọ ihe mere eme nke Artámila
Atọ na nrọ
Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke Antioquia na akụkọ ndị ọzọ
Site na enweghị ebe
Ezi njedebe nke ịma mma ụra
Ụlọ egwuregwu amachibidoro
Ndị nọ n'ụlọ ahịa; Onye nkuzi; Obi ọjọọ niile dị n'ụwa
Ọnụ ụzọ ọnwa. Akụkọ zuru oke
Obodo nke blackboard
Paulina, ụwa na kpakpando
The Green Grasshopper na The Apprentice
Akwụkwọ egwuregwu maka ụmụaka ndị ọzọ
Ịnyịnya nzuzu na Carnavalito
Ụlọ ihe nkiri nke "Ulises"
Naanị otu ụkwụ efu
Ahịhịa ndụ ndụ
Akụkọ m niile.
Gịnị bụ ọrụ kacha mkpa Ana María Matute?
Ana María Matute ahapụla anyị ọtụtụ ọrụ iji cheta ya na nke bụ eziokwu bụ na ịhọrọ naanị otu n'ime ha dị mgbagwoju anya. N'ime ndị niile o dere, ndị kacha pụta ìhè bụ ndị ọ kọrọ akụkọ ihe mere eme mgbe agha gasịrị, ma ọ bụghị n'echiche ndị okenye, kama n'echiche ụmụaka. Ọzọkwa ya trilogies dị mkpa.
Ma olee ọrụ kacha mkpa Ana María Matute rụrụ? N'okwu a, anyị nwere ike ịkọ ọtụtụ n'ime ha, ma Ikekwe nke mere ka a mara onye edemede nke kachasị ma nwee nyocha kachasị mma bụ The Dead Children.
Site n'akwụkwọ a, Ana María Matute nwetara ihe nrite Spanish National Narrative Prize na 1959. Ma ọ bụghị nanị nke ahụ, kamakwa Castilian Narrative Criticism Prize.
Ọ na-akọ akụkọ banyere ndị ikom abụọ, Daniel, bụ́ onye e mere ka ọ jee biri n’ala ọzọ na France bụ́ onye lọghachiri n’obodo ya n’ọrịa na ihe ịga nke ọma; na Miguel, nwa nke onye anarchist nke laghachiri n'obodo ya ma mechaa mee mpụ.
Gịnị kpatara akwụkwọ a? Ọfọn, dị ka ndị nkatọ, n'ihi na dị otú ahụ bụ ike na ihe nnọchiteanya nke mgbu, owu ọmụma, decadence, wdg. nke ahụ mere ka ndị na-agụ ya nwee mmetụta dị ka ndị odide ahụ.
Gịnị bụ akwụkwọ kacha amasị Ana María Matute?
Ịjụ onye edemede akwụkwọ nke kacha amasị ya bụ itinye ha n'agbụ. Ma ọ bụ na, maka ha, akwụkwọ niile nwere akụkụ na-amasị ha ma ha enweghị ike ịhọrọ otu. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ ndị odee nwere ike ịmasị ndị ọzọ.
N'ihe banyere Ana María Matute, ya onwe ya kwuputara na ya nwere ọkacha mmasị ya, Eze Gudu echefuru echefu. N'ime ya, e debere onye edemede ahụ na Middle Ages, kpọmkwem na mmalite na mgbasawanye nke alaeze Olar, ebe nwa agbọghọ ndịda, ihe e kere eke dị iche iche nke bi na ala ala na onye mgbaasị ga-agafe ụzọ ha.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ bụghị akwụkwọ a na-ejikarị amata ya. Ma ọ bụ echiche efu, njem na ụzọ o si ebute mmetụta ịhụnanya, ike, ịdị nro, agụụ, wdg. nke mere ka ọ bụrụ nke kacha amasị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Ana Maria Matute